Isan-karazany amin'ny iPhone | IPhone News (Pejy 3)
Kygo Xerior, fanafoanana feo sy tabataba lehibe
Ny headphone Wireless Kygo Xerior dia manome antsika feo manara-penitra sy fiasa avo lenta izay mijoro amin'ny AirPods.
Miseho ao amin'ny iOS 14.4 Beta izao ny fanamarihana momba ny tsiambaratelo nataon'i Apple
Ireo fanambarana vaovao momba ny tsiambaratelo dia manomboka miasa ao amin'ny iOS 14.4 Beta vaovao, tapitra ny fifehezana ny angon-drakitra nefa tsy fantatsika izany.
Apple dia mampandre ny fahazoana voalohany ny 'App Store Small Business Program'
Apple dia nanolotra ny programa App Store Small Business miaraka amin'ny fihenan'ny 15% ny komisiona ary androany dia manomboka mampandre ireo mahazo tombontsoa izy.
Ny EFF dia mahatsikaritra ny fitarainan'ny Facebook momba ny politika vaovao momba ny tsiambaratelo nataon'i Apple
Taorian'ny fahatezeran'i Facebook momba ny politika vaovao momba ny tsiambaratelo an'ny Apple, ny EFF dia namaritra ny resabe ho mampihomehy ary niandany tamin'i Apple.
Economic Daily News dia nilaza fa ho tonga amin'ny 2021 ny "Apple Car"
Raha ny filazan'ny gazety Taiwanese Economyc Daily News dia mety ho tonga amin'ny taona ho avy ny Apple Car an'ny orinasa Cupertino
Facebook dia mikasa ny hanao fampielezan-kevitra amin'ny dokambarotra fanafihana an'i Apple noho ny "fanoherana ny tsy fomban'ny atsy sy aroa"
Ireo tovolahy avy amin'ny tambajotra sosialy, Facebook, dia mikasa ny hanafika an'i Apple noho ny politika momba ny tsiambaratelo vaovao an'ny App Store.
Ny fakantsary iPhone 12 Pro mialoha ny ho avy Galaxy S21
Araka ny fivoahana iray, ny fakantsary iPhone 12 Pro dia mialoha mialoha ny fakan-tsary Samsung Galaxy S21 amin'ny fitsapana.
Raha ny filazan'i Barclays, ny iPad misy efijery OLED dia tsy hidona amin'ny tsena raha tsy amin'ny 2022 faran'ny ela
OLED dia ao anatin'ny drafitr'i Apple ho an'ny iPad, saingy toa tsy tonga izany raha tsy amin'ny 2022.
Arovy ny iPhoneo amin'ireto tranga ireto amin'ny Spigen
Izahay dia nanandrana tranga roa ho an'ny iPhone 12 vaovao izay mampifangaro ny endrika tsara miaraka amin'ny fiarovana tsara amin'ny vidiny mirary
Instagram dia efa mamela ny mampakatra sary ao amin'ny ProRaw vaovao an'ny iPhone 12 Pro
Instagram dia mitaky dingana iray lavitra kokoa amin'ny alàlan'ny famelana ny sary amin'ny endrika ProRAW vaovao an'ny iPhone 12 Pro.
Ny AirPods Max dia sahirana mandany bateria na dia tsy ao anatin'ny raharaha sy tsy ampiasaina aza izy ireo
Ny fanjifana bateria an'ny AirPods Max vaovao dia tsy dia avo loatra amin'ny fitsapana natao rehefa tavela ivelan'ny tranga izy ireo
81% amin'ireo iPhone navoaka tato anatin'ny efa-taona lasa dia efa manana ny iOS 14
Apple dia manivana ny angona fananganana iOS 14 sy iPadOS 14, fitaovana marobe marobe no efa mampiasa ny kinova farany an'ny Apple.
Google Stadia dia misy amin'ny iPhone sy iPad izao
Google dia efa mamela ny fidirana amin'ny Stadia mivantana avy amin'ny iPhone sy iPad anao, na dia tsy mandefa fampiharana manokana aza.
Ny taranaka fahatelo an'ny AirPods dia ho tonga amin'ny 2021 miaraka amin'ny famolavolana Pro ary latsaky ny 200 dolara
Apple dia mieritreritra ny taranaka fahatelo AirPods, mahazatra, miaraka amina endrika mitovy amin'ny Pro ary mora kokoa.
Ny iPhone 13 dia mety hanana efijery ProMotion 120 Hz sy "On foana"
Ny iPhone 13 dia mety hanana fampisehoana ProMotion 120 Hz sy "Mandrosoa hatrany". Fangaro amin'ny takelaka iPad Pro sy Apple Watch Series 6.
iOS 14.3 dia manisy fonony vaovao sy fonony mihetsika ho an'ny Apple Music
Apple dia mampihetsika fonosana sy fonony mavitrika vaovao ao amin'ny Apple Music, ankehitriny ireo mpanakanto dia afaka manararaotra ny fahaizany mamorona.
Ny fanomezana teknolojia tsara indrindra amin'ity Krismasy ity
Izahay dia mampiseho anao safidy miaraka amin'ny fanomezana teknolojia tsara indrindra azonao atao amin'ity Krismasy ity, kaomandy amin'ny vidiny.
Nanamafy i Kuo fa ho tanteraka tsy misy hataka andro ny fandaminana ny iPhone 13
Nilaza i Kuo fa ho tanteraka tsy misy hatak'andro ny fandaminana ny iPhone 13. Tsy hitranga toa an'ity taona ity izany, miaraka amin'ireo olana rehetra tratry ny areti-mandringana.
Arovy ny iPhoneo amin'ny tranon'ny Crystal InvisibleShield sy Gear4
Ny tranga mazava an'i Gear4 sy ilay mpiaro InvisibleShield dia hanampy ny iPhone hijanona tsy misy fampandrenesana
Azo jerena ao amin'ny Apple TV + izao ilay sarimihetsika «Wolfwalkers» mihetsika
Afaka mankafy sarimihetsika mihetsika Wolfwalkers ao amin'ny Apple TV + isika izao. Diniho ity angano irlandey mahafinaritra momba ny natiora ity.
UAG Monarch sy Lucent, fomba roa hikarakarana ny iPhone-nao
Notsapainay ny tranga UAG Monarch sy Lucent, izay miantoka fiarovana lehibe indrindra amin'ny fomba roa samy hafa be.
MagSafe Duo, mahafinaritra ary lafo
Notsapainay ny tobin'ny MagSafe Duo, miaraka amina endrika kanto ary afaka mitondra ao anaty paosy ianao nefa tsy voamarikao.
Apple dia nanavao ny algorithm Apple Watch EKG ao amin'ny watchOS 7.2
Ny watchOS 7.2 sy iOS 14.3 vaovao dia mitondra algorithm vaovao ho antsika amin'ny electrocardiogram miaraka amin'ny tanjon'ny Apple Fitness +.
Apple dia nanambara ny AirPods Max, headphones premium ho an'ny € 629
Apple dia nanambara ny AirPods MAx, ny headphone headband avo lenta avo lenta izay lafo vidy tsy ho azon'ny maro.
Samsung dia mieritreritra ny hanafoana ny charger telo volana aorian'ny ihomehezana an'i Apple
Samsung dia afaka manaraka ny dian'ny Apple ary manaisotra charger amin'ny Galaxy S21 ho avy aorian'ny fitsikerany an'i Apple noho izany.
Tsaho vaovao momba ny lantom-peom-paosy perxope 10x iPhones 2022
Tsaho vaovao momba ny solomailan'ny periziona x10 amin'ny iPhone 2022. Voamarina ny mpanamboatra singa amin'ireto solosaina ireto.
L0vetodream dia tompon'andraikitra amin'ny famongorana ireo tsaho milaza fa rahampitso dia afaka mahita Apple TV vaovao isika.
Araka ny filazan'i Bloomberg, Apple dia mamorona mpikirakira processeur misy cores CPU 32
Apple dia efa niasa tamin'ny processeur Apple Silicon vaovao hanomezana hery hatramin'ny cores CPU 32.
Satechi dia mampiditra charger MagSafe ho an'ny iPhone 12
Satechi dia nanolotra ny base MagSafe mifanaraka aminy voalohany, ary mamela ny iPhone hiampangana azy amin'ny 7.5W farafaharatsiny
Fampitomboana ny antso scam fa mody avy any Apple
Fampitomboana ny antso scam fa mody avy any Apple. Ny lamaody an-tariby dia nanjary lamaody, nanolo ny Apple, Amazon na Microsoft.
Afaka mizara famandrihana fampiharana amin'ny fianakavianay izahay izao
Apple manatsara ny drafitra famandrihana ankohonana ary mamela antsika hizara famandrihana fampiharana fahatelo amin'ny fianakavianay.
Microsoft Teams dia nohavaozina miaraka amin'ny fanohanan'ny CarPlay
Microsoft manavao ny fampiharana Teams hanohanana ny Apple CarPlay ary hanatsara ny fifandraisan'ny antso am-peo.
Telegram dia hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa miaraka amin'i Siri miaraka amin'ny fiasa "Manambara hafatra miaraka amin'i Siri"
Ny safidy "Manambara hafatra miaraka amin'i Siri" dia hita ao amin'ny kinova beta an'ny Telegram ary mety ho tonga tsy ho ela
Ny faharefoana amin'ny WiFi dia mamela ny fidirana amin'ny iPhone-nao
Ny manam-pahaizana iray dia nahita fahalemena amin'ny rafitra fidirana WiFi an'ny iPhone izay mamela ny fidirana amin'ny mombamomba anao.
Apple dia namoaka ny atiny nakarina indrindra avy amin'ny App Store tamin'ny taona 2020
Tonga ny fotoana hahafantarana izay fahombiazan'ny iOS App Store nandritra ny taona 2020 teo afovoantsika!
Sony nandefa 'Visual Story' fampiharana iray ahafahan'ny mpaka sary hetsika mizara ny sarin'izy ireo eo noho eo
Visual Story no tolo-kevitr'i Sony hanamorana ny fizotran'ny mpaka sary na fampakaram-bady ary ny mpanjifany.
Apple Fitness + akaiky dia akaiky ary azonao atao ny milaza izany amin'ny hype
Ny serivisy famandrihana Apple Fitness + dia ho akaiky kokoa sy akaiky ny famoahana azy raha mihaino ny dokambarotra izay tonga amintsika isika
Nandoa onitra an'i Apple i Italia noho ny fanaovana dokambarotra mamitaka momba ny fanoherana ny rano iPhone
Ny vatan'ny mpanjifa italiana dia mandoa an'i Apple amin'ny 10M euro satria tsy nanoro hevitra izy fa ny fanoherana ny rano dia any anaty rano miorina sy madio
Apple dia manolotra amin'ny Alatsinainy Cyber ​​2020
Asehonay anao ny tolotra tsara indrindra amin'ny vokatra sy kojakoja Apple azonao jerena mandritra ny Alatsinainy Cyber ​​2020
Apple dia mividy ny zana-kaonty amin'ilay horonantsary fanadihadiana 'The Vvett Underground'
Apple dia manana ny zony amin'ilay fanadihadiana fanadihadiana nandrasana hatry ny ela nataon'i Todd Haynes momba ny tarika 'The Vvett Underground' ho an'ny Apple TV +.
Arovy ny iPhone miaraka amin'ireo tranga Nomad ireo
Nomad dia manambatra ny hoditra miaraka amin'ny fiarovana avo lenta ao amin'ny Case Rugs, miaraka amin'ny fahaizana mitahiry carte de crédit.
Mujjo, ny safidy tsara indrindra amin'ny raharaha hoditra Apple
Mujjo dia manolotra antsika iray taona indray ny volony vita amin'ny hoditra ho an'ny iPhone 12 vaovao, miaraka amin'ny hoditra premium ary matevina farafahakeliny.
Ny serivisy video streaming AMC + dia tonga amin'ny fampiharana Apple TV ho fantsona famandrihana
Apple nanampy ny fantsom-pisoratana anarana AMC + ho an'ny fampiharana Apple TV any Etazonia mandra-pahatongan'ny famoahana azy iraisam-pirenena.
Ireto ny sary masina 5G samihafa izay mety ho hitanao ao amin'ny tsipika fizarana iPhone
Jereo ny sary masina 5G samihafa izay hitanao amin'ny iPhone 12 anao vaovao sy ny dikan'izy rehetra.
Aqara dia manomboka manohana ny jiro adaptive vaovao an'ny Apple's HomeKit
Aqara dia mialoha ny mpamokatra hafa amin'ny alàlan'ny fanampiana ny jiro vaovao mifanaraka amin'ny HomeKit miaraka amin'ny iOS 14.
Apple dia te handao an'i Qualcomm any aoriana ary mitaingina ny 5G
5g Ny orinasa Cupertino matetika dia manana olana amin'ireo mpamatsy izay te hanararaotra ny fahombiazana ananany ...
12 euro fotsiny ny fanaovana ny iPhone 400 Pro
Ny fifanakalozan-kevitra mandrakizay momba ny vidin'ny iPhone amin'ny vidiny, na ny vidiny, dia antsoy hoe inona no tadiavinao….
Mpiaro efijery Spigen ho an'ny iPhone
Asehonay anao ny iray amin'ireo mpiaro efijery iPhone tsara indrindra hitanao, ny fomba fametrahana azy ary ny valiny farany.
Nilaza i Microsoft fa ny tombony azony amin'ny lalao Xbox dia kely noho ny an'ny Apple ao amin'ny App Store
Nilaza i Microsoft fa ny tombony azony amin'ny lalao Xbox dia kely noho ny an'ny Apple ao amin'ny App Store. Izany dia tsy azo ampitahaina amin'ny 200 tapitrisa Xbox amin'ny iPhones an'arivony tapitrisa.
Wireless CarPlay dia manitatra amin'ireo mpamokatra maro kokoa ho an'ny Portless iPhone
Ny mpamokatra fiara dia maika hitondra CarPlay tsy misy tariby amin'ny fiarany manoloana ny iPhone tsy misy portaona amin'ny 2021.
Ity no Zoma Mainty an'ny Apple amin'ity taona ity
Apple dia efa nanomana ny Black Friday manokana miaraka amina karatra fanomezana maro ho an'ny vokatra vokariny
iFixit dia mamoaka ny sarin'ny atin'ny iPhone 12 Pro Max: bateria ao amin'ny L sy ny modely fakantsary vaovao
Ireo tovolahy ao amin'ny iFixit dia manaisotra ilay iPhone 12 Pro Max vaovao hamoaka bateria miendrika L vaovao sy modely sary vaovao.
Sintomy ny ambadika ao anatin'ny iPhone 12
Ny lohahevitr'ireo sary an-tsary dia manome fotoana fohy miresaka. Misy fotoana eo amin'ny fiainana izay ...
Fifanarahana amin'ny zoma mainty amin'ny iPhone, iPad ary Apple Watch
Misafidy anao izahay ny tolotra tsara indrindra amin'ny vokatra sy kojakoja Apple ho an'ny herinandro zoma mainty Amazon
Fitsapana ny Eufy 2K Pan sy Tilt, fakan-tsary tsara amin'ny vidiny lafo
Ny fakan-tsarimihetsika 2K Pan sy Tilt avy any eufy dia manome antsika lafin-javatra tsara amin'ny vidiny tena manintona sy mifanaraka amin'ny HomeKit Secure Video
Fahatsiarovana ny tolotra zoma mainty an'ny Apple Watch Series 5 ao Amazon
Fahatsiarovana ny tolotra zoma mainty an'ny Apple Watch Series 5 ao Amazon. Manana Apple Watch Series 5 LTE 40mm ianao. amin'ny vidin'ny fihomehezana.
Efa misy izao ny tranga vita amin'ny hoditra feno an'ny Apple an'ny iPhone 12
Apple dia nanangana tamim-pomba ofisialy ilay tranga vita amin'ny hoditra vaovao na Leather Sleeve ho an'ny iPhone 12 vaovao amin'ny vidiny 149 euro.
MacX Video Converter Pro, amboary ary ovao ny horonan-tsary misy kalitao 4K
Raha mitady rindranasa hiasa amin'ny rakitra 4K ianao dia mety hanarona ny filanao MacX Video Converter Pro izany.
Ny mpamorona ny fampiharana sary Halide dia mamakafaka ny fakantsary an'ny iPhone 12 Pro Max
Ny mpamorona ny fampiharana sary Halide dia mamakafaka ny fakantsary iPhone 12 Pro Max. Nanaitra anao ilay sensor vaovao.
HomePod Mini famerenana: bitika nefa mpampijaly
Nodinihinay ny mpandahateny vaovao an'i Apple, mahagaga kely fotsiny ny € 99 fotsiny, ary ao anatin'io boaty io no misy ny charger.
Beta faharoa ho an'ny Developers iOS sy iPadOS 14.3
Apple dia namoaka kinova beta 2 an'ny iOS 14.3 sy iPadOS 14.3 ho an'ny mpamorona. Kinova beta vaovao hanatsarana ny filaminana sy ny filaminana
Beats dia mandefa Powerbeats Ambrush Glow-in-the Dark
Beats dia mandefa ny Ambrush Powerbeats izay mamirapiratra ao anaty haizina. Iray ihany ireo Powerbeat efa fantatrao, miloko maitso fluorescent.
Foxconn dia voalaza fa nanandrana iPhone azo nakoraka tamina fikasana hanangana azy tamin'ny septambra 2022
Ny mety hisian'ny fandefasana iPhone mivalona amin'ny septambra 2022 dia voasivana, efa nosedraina izany i Foxconn.
Nanampy fanohanana ireo tambajotra Thread vaovao ho an'ny fitaovana HomeKit i Eve
Nanavao ny fitaovany i Eva mba hanohanana ireo tambajotran'orinasa automatique Thread vaovao izay mamela filaminana bebe kokoa ho an'ny tranontsika.
Ny iOS 14.3 vaovao dia hitondra ny ProRAW vaovao, ary ny fanohanana ny mpanara-maso vaovao ny PS5
Apple dia namoaka ny iOS 14.3 Beta 1 vaovao omaly niaraka tamin'ny fanampiana codec vaovao ho fanampin'ny fanohanan'ny mpanaraha-maso lalao video.
Eve Degree, tobin'ny toetrandro kely ho an'ny HomeKit
Nofakafakainay ny tobin'ny toetr'andro Eve Degree, mifanaraka amin'ny HomeKit ary miaraka amin'ny fampahalalana momba ny mari-pana, ny hamandoana ary ny tsindry.
Manomboka mampiofana ny polisy amin'ny fomba fanapahana iPhones ny Vondrona Eropeana
Navoaka ny famoahana ny vondrona eropeana mety hanampiana ireo polisy hanenjika iPhones ny olom-pirenena.
Apple dia nanetsika ny politikany hiverina ho an'ny fampielezan-kevitra amin'ny Krismasy
Apple dia mampihetsika ny fampielezan-kevitra miverina anio hatramin'ny 6 Janoary mba hanamorana ny fiverenan'ny fividianana
Veloma i Intel, Apple dia manolotra ny Mac voalohany misy azy miaraka amin'ny processeur-ny
Apple dia nanolotra ireo solosainany vaovao miaraka amina processeur M1, misy fanatsarana lehibe eo amin'ny fahefana sy ny fizakantena.
Apple Music dia nandefa playlist vaovao ho antsika hahitantsika ny mozika malaza be amin'ny viral
Apple dia mandefa lisitra Playlists vaovao amin'ny Apple Music izay hankafizantsika ny fihenan'ny viriosy na hanome antsika fiatoana ara-tsaina amin'ny playlist Do Not Disturb.
Ahoana ny fomba hijerena ny hetsika Apple Silicon "Zavatra iray hafa" anio tolakandro
Ahoana ny fomba hijerena ny hetsika Apple Silicon "Zavatra iray hafa" anio tolakandro. Apple dia manome anao fantsona fandefasana mivantana maro samihafa.
Mikatona ny fivarotana Apple, hetsika iray hafa "zavatra iray hafa"
Ny fivarotana an-tserasera Apple dia efa nikatona mandra-pahatapitry ny hetsika mifandray amin'ny Mac anio tolakandro
Azontsika atao izao ny mitahiry ireo tranga roa ambin'ny folo BookBook atsimo ho an'ny iPhone 12 Mini sy Pro Max
Ny fanokafana ny famandrihana ny iPhone 12 Mini sy ny iPhone 12 Pro Max, Roambinifolo atsimo dia manokatra ny famandrihana ny raharaha BookBook ho an'ireo.
iPhone 12 Pro VS Huawei P40 Pro, miatrika ny fakantsariny izahay
Izahay dia mampitaha anao ny fampitahana fakantsary eo anelanelan'ny iPhone 12 Pro sy ny iray amin'ireo terminal tsara indrindra ao amin'ny faritra an-tsary, ny Huawei P40 Pro.
Mitovy habe amin'ny iPhone 13 miaraka amin'ny fanatsarana ny Ultra Wide Angle
Ny iPhone 13 manaraka dia hitondra fanatsarana ny fakantsary sy ny haben'ny efijery mitovy amin'ireo maodely tamin'ity taona ity.
Ireo no vaovao momba ny iOS 14.2 vaovao
Wallpaper vaovao, emoji vaovao, fahafaha-manao vaovao ho an'ny sensor LiDAR an'ny iPhone 12 Pro eo amin'ireo zava-baovao ao amin'ny iOS 14.2.
Mitsitsia 25% ary fanampiny 10% amin'ny headphone avy any Sudio
Sudio dia manolotra fihenam-bidy 25% amin'ny telefaona True Wireless misy 10% fanampiny amin'ny alàlan'ny kaody atolotray anao.
Azo atao izao ny mihaino mozika ao amin'ny Spotify avy amin'ny Apple Watch fa tsy mila iPhone
Spotify dia efa mamela ny fahafaha-mihaino mozika mivantana avy amin'ny Apple Watch tsy mila iPhone.
John Turturro sy Christopher Walken handefa Severance ho an'ny Apple TV +
Ilay andiany vaovao izay hanomboka premiere amin'ny Apple TV + natao batemy ho Severance, dia kintana Christopher Walken sy John Turturro
Miaraka amin'ny kinova WhatsApp manaraka dia hitantana tsara kokoa ny fitehirizana
Miaraka amin'ny kinova WhatsApp manaraka dia hitantana tsara kokoa ny fitehirizana. Ho afaka hitantana tsara kokoa ireo sary sy horonan-tsary angoninao ianao.
Hakatona mandritra ny efa-bolana ny fivarotana Apple any UK
Hakatona mandritra ny efatra herinandro ny fivarotana Apple any Angletera noho ny areti-mandringana COVID-19
Mophie dia mamolavola ny batterie Juice Pack hahatonga azy ho universal
Gaga i Mophie amin'ny alàlan'ny fandefasana bateria ivelany vaovao, Juice Pack, izay mifamatotra amin'ny iPhone amin'ny alàlan'ny casing manokana.
Miasa amin'ny charger PD 20W ny MagSafe, fa tsy an'i Apple irery
Apple dia tsy nametra ny charger MagSafe tamin'ny charger amidiny aminay ao amin'ny fivarotany, lazainay aminao ny antsipiriany.
iPhone 12 Pro, avereno jerena aorian'ny fampiasana herinandro
Ny famerenana farany ny iPhone 12 Pro miaraka amina fisedrana fakan-tsary lalina dia eto, aza adino izany ary jereo ny iPhone vaovao.
Apple mandefa Apple One miaraka amina drafitra mora vidy kokoa raha Spotify kosa mampitandrina ny amin'ny fiakaran'ny vidiny
Taorian'ny fianjeran'ny tombontsoa Spotify taorian'ny fiakaran'ny mpanjifa ny Apple Music, Spotify dia mihevitra ny fiakaran'ny vidiny ...
Apple One dia misy izao. Inona izany ary ohatrinona no azonao tehirizina?
Ny fonosana serivisy Apple One izay manambatra ny Apple TV +, Apple Arcade, Apple Music ary iCloud dia azo alaina ankehitriny
Apple dia afaka manomboka mivarotra ny iPhone amin'ny fitehirizana 1TB
Aorian'ny fampitomboana ny fahafahan'ny output 12 iPhone ho 128GB, misy tsaho vaovao milaza fa afaka manana iPhone 1TB tsy ho ela isika.
Apple dia mivarotra iPhone 12 Pro bebe kokoa noho izay naloako
Toa gaga i Apple noho ny fangatahana mafy ny iPhone 12 Pro voarainy ary mitombo ny famandrihana.
Notsapainay ilay mpiaro ny efijery an'ny Apple Watch Spigen PRO FLEX EZ FIT
Atorinay anao ny fizotry ny fametrahana mpamonjy efijery ary ny valiny farany. Fiarovana tsotra sy mora vidy.
Vaovao Insta360 ONE X2, fakan-tsary 360 tsara indrindra no havaozina amin'ny alàlan'ny efijery vaovao sy fanoherana ny rano
Insta360 dia mandefa ny Insta360 ONE X2 vaovao, fakantsary video 360 tsara indrindra ankehitriny miaraka amin'ny efijery sy tantera-drano tsy misy trano fanampiny.
Tonga amin'ny fomba ofisialy amin'ny Tinder ny fiarahana amin'ny horonantsary virtoaly
Tinder, ilay fampiharana fampiarahana mampiaraka miaraka amin'ny hatsaram-panahy, dia nanetsika ny hookups horonantsary Face to Face mba hahafahantsika manana daty virtoaly ary hisorohana an'i Covid ..
Raha misy fisalasalana: maty ny tobin'ny AirPower
Ny tetik'asa AirPower base sy ny fitsapana rehetra dia nofoanana amin'ny fahatongavan'ilay toby MagSafe vaovao
Sintomy ny sary an-tsaina iPhone mahazatra namboarina tamin'ny modely vaovao
Sintomy ny sary an-tsary izay niaraka taminay nandritra ireo iPhone samihafa sy ireo kinova samihafa an'ny iOS amin'ny iPhone 12 vaovao.
Maherin'ny 2.000 ny tobin'ny polisy amerikana manana fitaovana hanokafana iPhone
Maherin'ny 2.000 ny tobin'ny polisy amerikana manana fitaovana hanokafana iPhone. Miaraka amin'ny fahombiazana bebe kokoa na kely dia manandrana miditra amin'ny finday voasakana izy ireo.
iFixit dia efa nanala ny iPhone 12 sy iPhone 12 Pro vaovao
iFixit dia efa nanambara ny atin'ny iPhone 12 vaovao sy ny iPhone 12 Pro vaovao ary nanararaotra nanombatombana ny fanamboarana azy ireo.
Ny charger MagSafe vaovao dia miadana indroa noho ny charger tariby
Apple dia nandefa ny MagSafe, charger tsy misy tariby vaovao an'ny Apple, miaraka amin'ireo iPhones vaovao, saingy mendrika ve izany? Charger haingana ve?
Apple TV + dia azo natao tamin'ny 'No time to die', ilay sarimihetsika James Bond vaovao
Mandeha ny tsaho fa ny Apple TV + dia eo akaikin'ny fahazoana ny zon'ny No Time to Die, ilay sarimihetsika James Bond farany.
Ho avy amin'ny Apple TV + ilay sarimihetsika vaovao 'Bride' nataon'i Scarlett Johansson
A24 sy Apple dia manamafy fa ny horonantsary Bride an'i Scarlett Johansson manaraka dia handray ny katalaogin'ny Apple TV +.
Eve Button, bokotra iray hifehezana ny HomeKit
Miaraka amin'i Eve Button dia afaka manao hetsika telo samihafa izay mifehy ny kojakoja sy ny tontolo HomeKit izahay
Ny iPhone 12 dia hiantso ny 5G na dia tsy ampiasainao aza izany
Ny iPhone 12 dia hanondro 5G na dia mifandray amin'ny tamba-jotra hafainganam-pandeha ambany aza ianao, inona ny hevitrao momba io fandrefesana io?
Ny mpampiasa L0vetodream dia maminavina fa hanana AirTags roa habe isika
Ilay mpampiasa Twitter malaza L0vetodream dia maminavina fa hanana ny AirTags vaovao amin'ny habe roa samy hafa tsy ho ela isika.
Sintomy eto ny sary namboarin'i Apple ho an'ny iPhone 12 vaovao
Apple dia nanamboatra rindrambaiko vaovao ho an'ny iPhone 12. Na izany aza, tsy manome azy ireo ho an'ny mpampiasa izany. Nefa eto dia azonao atao ny misintona azy ireo.
Concept Creator dia mampiseho antsika horonantsary momba ny AirTags
Izahay dia mizara foto-kevitra momba izay mety ho namorona ny AirTags avy amin'ny Concept Creator
Niaiky i Kuo fa mihoatra ny nantenaina ny fangatahana iPhone 12 Pro
Niaiky i Kuo fa ny fangatahana ny iPhone 12 Pro dia mihoatra ny zavatra antenaina. Ao amin'ny tarehimarika voalohany, ny iPhone 12 Pro dia mandresy ny iPhone 12.
Apple dia afaka mampiditra ny Mac vaovao amin'ny Apple Silicon amin'ny 17 Novambra
Prosser dia nanambara tao amin'ny Twitter-ny fa ny 17 Novambra no mety ho keynote farany amin'ny taona miaraka amin'ny Mac vaovao miaraka amin'ny Apple Silicon.
Apple dia nandefa tamin'ny fomba ofisialy ny iOS 14.1 sy iPadOS 14.1
Apple dia nanomboka taorian'ny fampisehoana ireo fitaovana vaovao ny kinova iOS 14.1 sy iPadOS 14.1 ho an'ny iPhone sy iPad.
Fivarotana voalohany amin'ny kamerà fiarovana an'i Eufy
Eufy dia manolotra fakan-tsary fiarovana roa miaraka amin'ny vidiny mirary hanararaotra ny tolotra Amazon Prime Day
Spotify dia manome paompy ho an'ireo mpamorona izay mamindra hatrany ny playlist amin'ny serivisy hafa
Mandrahona ireo mpamorona ny Spotify izay mbola mamela ny famindrana playlist eo anelanelan'ny serivisy hanafoana ny fidirana amin'ny API-dry zareo.
Fihenam-bidy amin'ny vokatra Apple amin'ny Amazon Prime Day
Ny Amazon Prime efa nandrasana hatry ny ela dia eto miaraka amin'ny fihenam-bidy an'arivony, nifantina ny tsara indrindra amin'ny vokatra Apple izahay
Fifanarahana UGREEN amin'ny Amazon Prime Day
Misafidy ny tolotra UGREEN tsara indrindra amin'ny kojakoja ho an'ny iPhone, iPad ary Mac ianao mandritra ny Andro Prime Amazon.
Charger USB-C 65W UGREEN, ampidiro amin'ity charger kely ity ny fitaovanao rehetra
UGREEN dia manome lozisialy hatramin'ny 65W miaraka amin'ny seranan-tsambo fanaterana herinaratra USB-C telo sy seranan-tsambo USB-A hafa ho an'ny fitaovanao rehetra.
Ahoana ny fametrahana ireo sary masina Instagram vaovao sy taloha amin'ny iPhone
Fitaovana iray izay tsy hain'ny maro aminareo izany fa navelan'i Apple nandritra ny fotoana elaela. Fampiharana sy ...
"Taratasy ho anao", horonantsary fanadihadiana Apple TV + manaraka momba ny rakikira vaovao Bruce Springsteen
Ny fanadihadiana Apple TV + vaovao mitondra ny lohatenin'ny rakikira Bruce Lettersteen ho avy eo "Letter to You," izay hivoaka amin'ny 23 Oktobra.
Manazava i Apple: ny ID amin'ny tarehy dia tsy afaka miasa amin'ny sarontava
Nohazavain'i Apple fa ny fanekena ny tarehy dia tsy afaka miasa miaraka amin'ny saron-tava raha mila filaminana amin'ny iPhone isika.
Apple dia manaparitaka efijery iPhone azo ovaina sy manamboatra tena
Apple dia manaparitaka efijery iPhone azo ovaina sy manamboatra tena. Ny sosona ambonimbony dia "hihalefaka" amin'ny hafanana.
PhotoTwins, mamafa ny sary dika mitovy ary manafaha toerana amin'ny iPhone sy iCloud anao
PhotoTwins dia rindranasa iray tena tsotra izay ahafahanao manafoana toerana amin'ny iPhone sy amin'ny iCloud amin'ny famafana ireo sary dika mitovy.
Ahoana ny fomba hisorohana ny AirPods anao tsy hiova fitaovana mandeha ho azy
Ahoana ny fomba hisorohana ny AirPods anao tsy hiova fitaovana mandeha ho azy. Miaraka amin'ny iOS 14, ny rohy misy eo anelanelan'ny fitaovana dia mandeha ho azy, fa azo foanana.
Ny fifaninanana Amazon Fire TV Cube an'ny Apple TV ve?
Andeha hojerentsika ireo fitaovana roa ireo ary hieritreritra raha toa ka tena fifaninanana ho an'ny Apple TV 4K ny Amazon Fire TV Cube.
Tady fahatsiarovana ny Lalao Olaimpika tsy natao velively
Araka ny fivoahana iray dia nanamboatra fehin-kibo fahatsiarovana vaovao ho an'ny Lalao Olaimpika Tokyo ny orinasa Cupertino.
Fanadihadiana ny takela-jiro Nanoleaf Hexagons
Ny jiro ao an-trano dia nijanona hatry ny ela ho jiro fotsiny mba ho lasa haingon-trano izay manova ny ...
Ireo no Emoji vaovao 217 izay ho tonga amin'ny taona ho avy
Ireo no Emoji vaovao 217 izay ho tonga amin'ny taona ho avy. Ny fonosana dia natolotra ho Emojis 13.1, ary ho hitantsika ao amin'ny iOS 14 amin'ny 2021 izy ireo.
Efa nihaino mozika amin'ny HD ve ianao? Andramo maimaim-poana mandritra ny 90 andro
Amazon dia manomboka manolotra mozika amin'ny HD hanatsarana ny kalitaon'ny serivisy mivantana. Toa tsara izany? Azonao atao ny manandrana azy maimaim-poana
Mihidy izao ny fivarotana an-tserasera Apple!
Nikatona ny tore online. Apple dia manomboka fiomanana amin'ny lahateny fototra androany
Araho mivantana ny fampisehoana nataon'i Apple miaraka amin'i Actualidad iPhone
Araho mivantana ny fampisehoana ny Apple Watch, iPad Air ary ny AirTag vaovao, naneho hevitra tamin'ny teny Espaniôla ary nandray anjara tamin'ny resaka.
Ny tena fijerin'ny AirTags, hoy i Prosser
Ny tena fijerin'ny AirTags, hoy i Prosser. Miaraka amin'ny bokotra afovoany lehibe amin'ny lafiny iray izay saika mibodo ny velarana iray manontolo.
Loko vaovao sy famahanana haingana ho an'ny Apple Watch Series 6
Namoaka ny hany fanovana roa lehibe tamin'ny Apple Watch Series 6, izay ho avy miaraka amin'ny fanohanana ny famahana haingana sy ny loko vaovao.
Apple hampiato ny Fortnite "Midira miaraka amin'i Apple" amin'ny 11 septambra
Ny fampiasa izay mamela ny fidirana amin'ny Fortnite miaraka amina ID an'ny camouflaged Apple dia tsy ho hita intsony manomboka ny 11 septambra
Ampiasao amin'ny alàlan'ny consoles lalao anao ny headphones tianao indrindra noho ireo adaptatera UGREEN ireo
Amin'ireto adaptatera ireto dia azonao ampiasaina ny AirPods hilalaovanao amin'ny Nintendo Switch, na headset bluetooth hafa.
Navoakan'ny PUBG ny fifandraisany tamin'i Tencent hahafahana miverina amin'ny tsena indiana
Noterena hijanona ny PUBG Corporation miankina amin'ny Tencent amin'ny fampivoarana ny kinova findainy raha te hanohy any India izy
Apple dia efa namorona sarontava roa, mangarahara ny iray
Ny nofinofin'ny mpampiasa maro dia mety ho tanteraka amin'ny ho avy tsy ho ela, satria i Apple dia efa namolavola roa ...
Miomàna handray ny keynote amin'ny 15 septambra miaraka amin'ireo rindrambaiko ireo
Ny sary am-peo ho an'ny iPhone miaraka amin'ny kisary Apple ao amin'ny keynote ho an'ny 15 septambra dia efa misy izao
Manomboka ny famokarana betsaka ny iPhone 12 ary efa mandeha ny AirTag
Ny famokarana betsaka ny iPhone 12 dia manomboka ary ny an'ny AirTag dia efa mandeha. Hanomboka vetivety ny famokarana iPhone 12 6,1.
Apple dia manakarama mpikambana ao amin'ny ekipa Apple TV Tim Connolly
Toa miha mirongatra ny serivisy streaming streaming Audiovisual, ary Apple, izay misolo tena azy saika amin'ny ankamaroan'ny ...
LiDAR sy Mac Pro ao anaty fiara izay misy sarintany Apple Maps
Ny fiara Apple Maps dia mampiasa LiDAR, iPad ary Mac Pro mba hisamborana ireo angona ilaina rehetra arak'ilay orinasa ihany.
Mampitandrina ny amin'ny fiainam-piainan'ny olona i Apple amin'ny horonan-tsary mahatsikaiky
Mampitandrina ny amin'ny fiainam-piainan'ny olona i Apple amin'ny horonan-tsary mahatsikaiky. Mampiseho izay tsy tokony hataonao mba hanitsakitsahana ny fiainanao manokana.
Apple hanangana turbine rivotra lehibe roa eto an-tany ho an'ny mpizara Danoa
Apple dia hanangana turbine roa lehibe indrindra eto an-tany ho an'ny mpizara Danoa. Hanana 200 m izy ireo. Avo.
Manakana ny PUBG toa ny TikTok ihany koa i India
Ny hetsika farany farany natao tany India dia ny fanakanana ny fampiharana bebe kokoa, amin'ity indray mitoraka ity avy any Tencent, toy ny lalao video PUBG Mobile nahomby.
Torohevitra kambana, fampiononana ary loko miaraka amin'ny fahaleovan-tena tena tsara
Izahay dia nanandrana ny headphones Tip Twins avy any Fresh'n Rebel miaraka amin'ny fahaleovan-tena tena tsara, fanoherana rano ary loko maromaro.
Nitarina ny fe-potoana fividianana AppleCare +
Apple manampy iray taona aorian'ny nividianany fitaovana ho an'ny fiantohana AppleCare +
Apple dia nanampy ny governemanta amerikana hanao iPod "Top Secret"
Apple dia nanampy ny governemanta amerikana hanao iPod "Top Secret". iPod novaina izay hitondra rakitra miafina ao anaty kapila mafy.
Miomana amin'ny National Parks Challenge amin'ny 30 Aogositra
Apple dia efa manana ny fanamby vaovao vonona amin'ity volana aogositra ity ary mifantoka amin'ny valan-javaboary izany. Hita amin'ny 30 Aogositra ho avy izao
Fa maninona ny Epic no tsy manao toy izany amin'ny Xbox, PlayStation, ary Nintendo?
Epic dia nanomboka ady tamin'i Apple sy tamin'i Google. Inona no mitranga eo amin'ny tontolon'ny video consoles? Hanelingelina azy ireo koa ve ny Epic?
Epic dia mamorona drafitra tonga lafatra ary tsy maintsy ihodivirana ao anaty fandrika i Apple
Fornite dia nesorina tao amin'ny App Store tamina fihetsiketsehana nateraky ny Epic ary mitady ny hahatonga an'i Apple ho lehilahy ratsy amin'ny sarimihetsika
Apple handefa fonosana serivisy antsoina hoe "Apple One"
Apple dia handefa fonosana serivisy antsoina hoe "Apple One". Hisy fonosana serivisy maromaro miaraka amin'ny vidiny samihafa, toy ireo efa zatra hitantsika amin'ny orinasa telefaona, Internet ary TV.
Eva cam review: fiainana manokana, kalitaon'ny sary ary endri-piarovana mandroso
Tsiambaratelo, fampandrenesana marani-tsaina ary fanohanana feno HomeKit Secure Video amin'ny fakantsary faran'izay tsara efa vita.
Ahoana ny fomba hizarana naoty amin'ny app Notes avy amin'ny iOS na iPadOS
Mampianatra anao hizara fizarana haingana avy amin'ny fampiharana iOS sy iPadOS Notes izahay, ary koa hianatra ny fanovana ny fahazoan-dàlana nomeny.
Fandoavana haingana sy mora amin'ireto tariby sy charger avy any UGREEN ireto
UGREEN dia manolotra antsika ny charger sy tariby ilaina amin'ny famoahana haingana ny fitaovantsika amin'ny vidiny mirary
Ny fametrahana ny andriamby ao amin'ny iPhone 12 dia mampiakatra ny fanantenana
Ny fivoahan'ny izay toa ao aorinan'ny iPhone 12 misy andriamby marobe napetraka ao anaty lamina boribory dia manolotra fanatsarana maro
Atsaharo ny arak'izay ilaina rehetra
Charger telo misy seranan-tsambo samy hafa sy fahefana mamehy miaraka amin'ny habe sy fampisehoana mety hitondrana azy ireo na aiza na aiza ary amin'ny vidiny mirary.
Apple dia namoaka ny iOS 14 Beta 4 ho an'ny Developers
Apple dia namoaka ny iOS 14 Beta 4 ho an'ny mpamorona ary efa misy amin'ny fanavaozana Over the Air ho an'ireo mpampiasa rehetra nametraka azy io.
Spotify dia mitombo ho 299 tapitrisa mpampiasa mavitrika
Taorian'ny fianjeran'ny mozika streaming miaraka amin'ny areti-mifindra Coronavirus, Spotify dia nitombo hatrany amin'ny 299 tapitrisa mpampiasa mavitrika.
Fika iOS 9 izay mety tsy fantatrao [Video]
Manohy miasa mafy amin'ny iOS 14 sy ny vaovaony rehetra izahay amin'ny dingana beta hahafantaranao azy amin'ny ...
Nampitandrina i Qualcomm ora maro alohan'ny nanamafisana azy tamin'ny fomba ofisialy
Nivoaka tamin'ny resadresaka iray natao tamin'ny Reuters ny tompon'andraikitra ambony Qualcomm, izay manazava fa manana olana amin'ny famatsiana ireo chips ho an'ny 5G.
Ny iPhone SE dia mitarika an'i Apple hanapaka ny firaketany manokana indray
Apple dia nanambara ny angon-drakitra ara-bolany ho an'ny telovolana fahatelo amin'ny 2020, izay tena tratry ny areti-mandringana amin'ny ...
Netro Pixie, mpanara-maso ny fantson-drano
Notsapainay ny mpanera ny fanondrahana Netro Pixie izay manambatra ny fizakantena feno noho ny famerenana amin'ny laoniny ny masoandro amin'ny rafitra fanondrahana marani-tsaina tsy manam-paharoa.
iOS 14 manamboatra bug bibikely goavambe
Fantatry ny mpampiasa IOS fa ny keyboard dia tsy iray amin'ireo teboka matanjaka amin'ny resaka ...
Ny tranofiara voalohany amin'ny vanim-potoana faharoa an'ny For All Humanity dia misy izao
Apple dia namoaka tao amin'ny fantsona YouTube ny tranofiara voalohany tamin'ny fizarana faharoa amin'ny andiany For all humanity
Ny ID ID an'ny iPhone dia mety hahatratra ireo Mac
Apple dia manampy amin'ny kaody macOS Big Sur momba ny fahatongavan'ny Face ID amin'ny Macs. Mety ho akaiky kokoa ny fahatongavany io
Famantarana ny toerana sy ny fihetsika ho an'ny headphone Apple
Patanty iray izay mety misy ifandraisany mivantana amin'ny AirPods Studio vaovao dia mampiseho ny toerana sy ny fahitana fihetsika
Logitech K380 sy Pebble, fitendry ary totozy ho an'ny fitaovanao rehetra
Izahay dia nanandrana ny mpivady Logiteach K380 sy Pebble, kitendry sy totozy marobe izay azonao entina miaraka aminao foana sy amin'ny fahaleovan-tena mahavariana.
Ireo kabary vaovao an'ny Twins avy amin'ny Fresh'n Rebel dia amidy ao amin'ny Fnac
Fresh 'n Rebel dia nandefa ny headphones Twins sy Twins Pro vaovao, headphones True Wireless izay tonga teo amin'ny tsena ...
Ajax, fiarovana tsy misy tariby ary fepetrao
Notsapainay ny rafitra fiarovana Ajax, izay mamela fananganana modely manokana sy tsy misy sarany isam-bolana
Apple miasa amin'ny boaty bateria tsy misy taratra
Apple dia mbola tapa-kevitra araka ny tsaho rehetra handefa iPhone tsy misy mpampitohy Lightning amin'ny fe-potoana antonony, izay iasany manomboka izao
Apple TV + dia manambara ny 'Palmer', horonantsary vaovao iray lalaovin'i Justin Timberlake
Apple TV + dia nanambara famoahana vaovao roa ho an'ny katalaoginy: Palmer, sarimihetsika iray lalaovin'i Justin Timberlake; ary Echo 3, andian-tantara foronina.
Transcend ESD250C SSD Review: Haingam-pandeha, Volavola ary mety indrindra
Ny fisian'ny fampidirana tahiry ivelany ho an'ny iPad hatramin'ny nanombohan'ny Apple ny iPad Pro tamin'ny USB-C dia tsy hisokatra ...
Brydge dia efa manana ny kitendry ho an'ny iPad amin'ny Espaniôla ao amin'ny Apple Store
Ny kitendry ara-batana dia nanjary fitaovana ilaina tsy maintsy ilaina ho an'ny iPad, ary iray amin'ireo ...
Apollo Bold, headphones vaovao TWS misy fanafoanana ny tabataba mavitrika
Ny headphones Tronsmart Apollo Bold vaovao dia manambatra ny teknolojia "True Wireless" miaraka amin'ny Cancellation Noise Mavitrika amin'ny vidiny lafo.
Apple dia nandresy tamin'ny ady hetra hanoherana ny Vondrona Eropeana
Ny ady nifanaovan'ny Apple sy ny Vondrona eropeana ho an'ny fandoavan-ketra izay entin'ny orinasa any amin'ny faritaniny ...
Apple TV + dia miaro ny zon'ny adaptation an'ny Snow Blind
Ny vaovao farany mikasika ny serivisy video streaming an'i Apple, Apple TV +, dia avy amin'ny medium Deadline. Araka ny…
Foxconn dia efa manamboatra solomaso fitsapana ho an'ny Apple Glass
Foxconn dia efa manamboatra solomaso fitsapana ho an'ny Apple Glass. Nisy tsipika famokarana solomaso AR natsangana tao amin'ny orinasa Foxconn any Sina.
Samsung dia mieritreritra ny hamela charger miaraka amin'ireo finday avo lenta
Samsung dia afaka manaraka ny dian'ny Apple ary mijanona tsy mampiditra ny charger USB amin'ny maodely finday manaraka atombony
Ny fampiharana Apple Music amin'ny Samsung Smart TVs dia mampiseho tononkira hira amin'ny fotoana tena izy
Ny fampiharana Apple Music ho an'ny Samsung smart TVs, dia efa mampiseho ny tonon'ireo hira ampiasainay, toa ny iPadOS 14 ihany
Ahoana ny fampiasana ny vaovao ao amin'ny Messages ao amin'ny iOS 14
Amin'ity indray mitoraka ity isika dia hifantoka amin'ny vaovao izay entin'ny rindranasan'ny Messages miaraka amin'ny fahatongavan'ny iOS 14 sy ireo fiasa tsy mampino rehetra ireo.
Miaraka amin'ny codec H.266 vaovao, ny horonan-tsarimihetsika avo lenta dia ho voasambotra amin'ny bytes vitsy kokoa
Miaraka amin'ny codec H.266 vaovao, ny horonan-tsarimihetsika avo lenta dia ho voasambotra amin'ny bytes vitsy kokoa. Tokony ho indroa ny famatrarana ny H.265 ankehitriny.
Native Union sy Maison Kitsuné dia miara-miasa amin'ity fanangonana ity
NAtive Union sy Maison Kitsuné dia miaraka amina fanangonana kojakoja vaovao ho an'ny fitaovantsika izay ho tian'ny fashionista.
Amazon Echo Auto famerenana: tsara, fa misy fetrany
Notsapainay ny Amazon Echo Auto vaovao izay entin'i Alexa ao anaty fiara, ary asehonay anao ny zavatra azony atao sy ny fetrany lehibe
Inona no atao hoe VPN ary inona no ilana azy?
Izahay dia hanazava ny atao hoe inona ny VPN ary inona ny tombony omeny ho an'ny mpampiasa tsy miankina, fa tsy ho an'ny orinasa ihany. Inona no azonao ampiasaina azy?
Ny fizaham-pahasalamana momba ny fahasalaman'ny bateria dia tonga amin'ny Apple Watch miaraka amin'ny watchOS 7
Ny watchOS 7 vaovao dia hamela antsika hahafantatra ny satan'ny batterin'ny Apple Watch antsika noho ny fiasa vaovao momba ny Battery Health.
Inona no vaovao ao amin'ny app Home
Keynote WWDC 2020: Inona no Vaovao ao amin'ny App Home.
Inona no vaovao ao amin'ny iOS 14
Fampisehoana Keynote WWDC 2020: Inona no Vaovao ao amin'ny iOS 14
Aiza no hijerena mivantana ny WWDC 2020
Araho ny hetsika voalohany an'ny WWDC 2020 miaraka amin'ny iOS 14 ary vaovao misimisy kokoa mivantana amin'ny fanehoan-kevitra sy ny vaovao rehetra atolotry Apple.
Logitech StreamCam, tena tsotra ary feno tanteraka
Notsapainay ny iray amin'ireo fakantsary feno indrindra teny an-tsena, miaraka amina fampitaovana lozisialy sy rindrambaiko izay mahasamihafa ny fifaninanana
Otto Q avy amin'i Moshi, famolavolana sy fahombiazana amin'ny toby famahanana tsy misy tariby
Izahay dia nanandrana ny tobim-pitsarana Otto Q an'i Moshi, izay milaza fa izy no base base tsy misy haingana indrindra eny an-tsena, miaraka amina endrika tsara sy fifehezana ny mari-pana
Apple dia mahazo patanty vaovao handefasana ny rano izay afaka miditra amin'ny iPhone na Apple Watch
Apple dia mahazo patanty vaovao handefasana ny rano izay afaka miditra amin'ny iPhone na Apple Watch. Rafitra hijerena sy hamoahana ny fidiran'ny rano.
Vaovao ao amin'ny elanelan'ny Philips Hue Line: jiro marevaka, jiro LED havaozina ary jiro vaovao
Vaovao ao amin'ny elanelan'ny Philips Hue Line: jiro marevaka, jiro LED havaozina ary jiro vaovao. Vokatra telo hanampy ny faritry Hue.
Ity no prototype an'i Apple ho an'ny iPhone azo nakambana voalohany
Jon Prosser dia manome antsika antsipiriany momba ny iray amin'ireo prototypes izay hananan'i Apple dieny izao amin'ny fitsapana ho an'ny iPhone azo avadika manaraka.
Bomaker SiFi II, headphones True Wireless izay tena mandoa
Ny talenta TWS SiFi II an'ny Bomaker dia manolotra kalitaon'ny feo mahavariana sy fampisehoana amin'ny vidiny ambany.
Apple patanty rafitra iray mba "hametahana" selfie vondrona lavitra
Apple dia manaparitaka rafitra iray mba "hametahana" selfie vondrona iray avy lavitra. Afaka manana sary vondrona ianao raha tsy eo ny mpandray anjara.
Fivarotana Apple Apple marobe no lasa sary hosodoko amin'ny hafatra
Ny sasany tamin'ireo magazay niangona ho an'ny fandrobana sy ny hafatra fandraisana soa aman-tsara avy amin'ny mpanao fihetsiketsehana milamina
Anker Nebula Capsule, mamakafaka ilay projet portable azo zahana
Notsapainay ny Nebula Capsule, tetik'asa ultra-portable miaraka amin'ny fizakan-tena 4 ora, Android 7.1, feo tsara ary AirPlay mifanaraka.
Tonga ao amin'ny Apple News + ny audio audios amin'ny beta voalohany amin'ny iOS 13.5.5
Ny beta voalohany an'ny iOS 13.5.5 dia manambara fa misy audio vaovao ho an'ny Apple News +, serivisy famandrihana vaovao Apple.
Ny fampiharana Tracking Coronavirus any UK dia hitazona ny angon-tsainay mandritra ny 20 taona
Governemanta maro no efa manara-maso ny mponina ao aminy amin'ny fikarohana ny Coronavirus, ao amin'ny Fanjakana Mitambatra dia nandefa ny fampiharana azy ireo izy ireo izay mitahiry angona mandritra ny 20 taona.
Apple dia namoaka fanavaozana ny iOS 13.5.1, iPadOS 13.5.1, watchOS 6.2.6, tvOS 13.4.6, ary HomePod 13.4.6
Apple dia namoaka fanavaozana ny iOS 13.5.1, iPadOS 13.5.1, watchOS 6.2.6, tvOS 13.4.6, ary HomePod 13.4.6.
Jason Sudeikis mitondra ny "Ted Lasso" malaza amin'ny Apple TV +
Jason Sudeikis dia mitondra ny "Ted Lasso" malaza amin'ny Apple TV +. Ilay mpanazatra doka NBC Sports malaza dia hisalotra andian-tantara ao amin'ny Apple TV +.
Gal Gadot hilalao an'i Hedy Lamarr ao amin'ny Apple TV +
Gal Gadot dia hilalao an'i Hedy Lamarr ao amin'ny Apple TV +. Tamin'ny voalohany dia tetikasa vaovao an'ny rojo Showtime ary tamin'ny farany dia nalain'i Apple ho any amin'ny lampihazo io.
Mivoaka tampoka ny prototype iPod an'ny taranaka fahatelo
Ny fanamarihana mahaliana ankehitriny dia ny iPod Touch an'ny taranaka fahatelo, ary nisy ny prototypa niseho izay misy fakan-tsary any aoriana.
Fivoahana voalohany amin'ny fakantsary iPhone 13 izay ho hitantsika tamin'ny 2021
Herintaona mahery no ananantsika ny iPhone 13 fa androany ny famoahana voalohany ny fakantsary mety hoentiny dia manomboka fantatra.
Ity no fehin-kibo hoditra Loop vaovao an'ny Apple Watch
Toa i Apple no ao an-tsainy hanavao ny hoditra Loop, iray amin'ireo tadiny malaza indrindra io.
Ny Scout UAG dia manome izay rehetra tsy ananan'ny iPad Pro's Smart Keyboard Folio. Tranga fiarovana iray hanalavirana ny fanahianao.
Notsapainay ny bateria ivelany UGREEN tamin'ny 20.000 XNUMX mAh sy ny Fandefasana angovo
Hodinihinay ny batterie ivelany an'i UGREEN miaraka amin'ny fahaiza-manaon'ny 20.000mAh sy ny herinaratra mametra hatramin'ny 18W miaraka amin'ny Her ...
Apple dia manamafy ny première Little Voice an'i Brad Abrams ao amin'ny Apple TV + amin'ny 10 Jolay
Apple dia manamafy ny famotsorana ilay Little Voice nandrasana hatry ny 10 Jolay. Andian-tsarimihetsika JJ Abrams miaraka amin'ny mozikan'i Sara Bareilles.
Charger vaovao UGREEN 65W vaovao ho an'ny fitaovanao rehetra
Ity charger UGREEN ity dia misy faladiany USB-C telo, socket USB-A ary heriny 65W amin'ny vidiny mitovy amin'ny mahazatra.
Kely sy mora kokoa, toy izany koa ny HomePod vaovao
Ny nofinofin'ny HomePod mora vidy dia toa akaiky ny tarehin-javatra, tsy azontsika an-tsaina ny fandefasana iray hafa ...
Fehin-kodiarana sy tranga misy azy ho an'ny Apple Watch
Izahay dia mamakafaka tadiny roa avy amin'ny marika monowear sy tranga fitsangatsanganana izay mitahiry azy ireo ary miaraka amin'izay dia miasa ho toy ny foibe famahanana ho an'ny smartwatch anao.
Nomad dia mandefa loko vaovao an'ny Case Rugs ho an'ny AirPods Pro
omad dia manome loko "hoditra voajanahary" vaovao ho an'ny Case Rugs ho an'ny AirPods Pro, iray amin'ireo safidy tsara indrindra hiarovana ny headphones.
Twitter ho an'ny iOS dia haneho fampitandremana raha mampiasa fiteny tsy mendrika isika
Twitter dia mikasa ny hanampy hafatra fampitandremana ho an'ireo mpampiasa mampiasa fiteny maloto alohan'ny hamoahana bitsika iray.
France sy UK dia milaza TSIA ho an'ny fampiharana Apple sy Google manohitra ny COVID-19
Frantsa sy Angletera dia efa nilaza fa hamolavola ny fampiharana azy manokana nefa tsy hampiasa ny Google sy Apple API, izay hahatonga azy ireo tsy hiasa tsara
Apple CarKey mety ho eo an-jorony
Apple dia mitondra Apple CarKey dingana iray hafa miaraka amin'ny famaritana na protokol an'ny Digital Key Release 2.0
Lavin'i Frantsa ny fomba fanarahana Coronavirus an'i Apple sy Google 'manavao sy mahomby'
Manatevin-daharana ireo firenena izay tsy mampiasa Apple na Google's Coronavirus API toerana i Frantsa na dia mahomby sy manavao aza.
Toy izao no itiavan'i Apple anao hanova hafatra aorian'ny fandefasana azy ireo
Ireo mpampiasa hafatra dia tsy mahita ny fahafahany manova hafatra, na izany aza, Apple dia efa mieritreritra ny fomba fampiharana azy ireo.
Mujjo mandefa ny tranga tonga lafatra ho an'ny iPhone 11 Pro "night green" anao
Mujjo dia nandefa ilay tranga vaovao loko Slate Green ho an'ny iPhone 11 Pro, miaraka amin'ny hoditra lafo vidy ary tsy dia mampitombo ny hateviny.
Apple dia afaka mamela ny oximeter amin'ny Apple Watch noho ny COVID-19
Apple dia afaka mamela ny oximeter amin'ny Apple Watch noho ny COVID-19. Angamba mety amin'ny andiany 6, na amin'ny fiambenana manaraka ho an'ny andiany ankehitriny.
Avadiho ho lasa tsy misy tariby ny CarPlay noho ny CPLAY2air
CPLAY2air dia mamela anao hanova ny CarPlay tariby mahazatra ho lasa tsy misy tariby raha mitazona ny asany rehetra tsy miovaova
Corona Datenspende, fampiharana alemana hiadiana amin'ny coronavirus
Any Alemana dia efa manana ny fangatahany hiadiana amin'ny Covid-19 miaraka amin'ny angon-drakitra mpampiasa te hisoratra anarana izy ireo, antsoina hoe Corona Datenspende